Ndepụta zuru ezu nke mgbanwe OST Faịlụ njehie na Nsogbu
Home ngwaahịa DataNumen Exchange Recovery Ndepụta nke Njehie
Exchange OST Faịlụ njehie na Nsogbu
Ndepụta nke njehie na Nsogbu zuru oke na mgbanwe OST Files
4.90 / 5 (site na 1,521 votes)
Mgbe ị jiri Microsoft Outlook iji mepee rụrụ arụ or ụmụ mgbei folda na-anọghị n'ịntanetị (OST) faịlụ, ma ọ bụ mekọrịta ya na ihe nkesa Exchange, ị ga-ezute ozi njehie dị iche iche, nke nwere ike ịbụ ihe mgbagwoju anya nye gị. Yabụ, ebe a anyị ga-anwa ịdepụta njehie niile enwere ike, wee hazie dị ka ugboro ha si me. Maka njehie ọ bụla, anyị ga-akọwa ihe mgbaàmà ya, kọwaa ihe kpatara ya ma nye azịza ya, ka ị nwee ike ịghọta ha nke ọma. N'okpuru ebe anyị ga-eji 'filename.ost'iji gosipụta njehie gị Exchange OST aha faịlụ.
“Ike imeghe ndabere gị email nchekwa. Faịlụ xxxx.ost abụghị faịlụ folda na-anọghị n'ịntanetị."
“Enweghi ike ịgbasa folda ahụ. Enweghi ike imeghe ntọala folda. Enwere ike ịchọpụta njehie na faịlụ xxxx.ost. Kwụsị ngwa niile ejiri rụọ ọrụ, ma jiri Ngwaọrụ Mmezi Igbe."
Gaa ọtụtụ ọnụọgụ esemokwu.
Enweghi ike imeghe ihe ụfọdụ Outlook mgbe anọghị n'ịntanetị.
Dị iche iche njehie mgbe mmekọrịta Exchange Server igbe akwụkwọ ozi dị na gị OST faịlụ.
Ọzọkwa, mgbe ị na-eji folda na-anọghị n'ịntanetị (OST) faịlụ na Microsoft Exchange server, ị nwekwara ike na-ezute ndị na-esonụ nsogbu ugboro ugboro, nke nwere ike-edozi site DataNumen Exchange Recovery mfe.
Ehichapụrụ ozi ịntanetị na ihe ndị ọzọ na igbe akwụkwọ ozi Exchange site na ndudue.
Gbanwee Exchange OST faịlụ na faịlụ Outlook PST.
Mgbanwe dị ugbu a na ọnọdụ mgbake.
Na-atụgharị uche OST nsogbu faili (OST nha faịlụ ruru ma ọ bụ karịa njedebe 2GB).